Staff Reporter – Geelle Mag
Ganacsade caan ah oo ku dhintay weerarkii golaha shacabka Puntland.
Cali Axmed Posted On November 6, 2019
Ganacsade caan ah ayaa ku dhintay weerarkii lagu qaaday xarunta Barlamaanka Puntland. Abdikariin Mahamed Farah loo yaqoon Dhagawayne ayaa ahaa ganacsade degan magaalada Garowe. Magaalada Garowe waxa ka dhacay rasaas aad u xoog badan oo laga maqlay meelo badan oo […]
Deegaanka Eyl ayaa go’doon ah oo dufaani ku dhufatay
Waa sidee xaaladda deegaanka Ina-diideey oo uu dhawaan dagaal beeleedka ka dhacay?
Duufaan ku dhufanaysa deegaanka Eyl Saacadaha soo socda